Home Wararka Caruur iyo Haween ku nool degaanka Ceel Dhaarir oo ku sumoobay caano...
Caruur iyo Haween ku nool degaanka Ceel Dhaarir oo ku sumoobay caano ay cabeen
Wararaka ka imaanaya degaanka Ceel Dhaariri ee Gobolka Bari ayaa sheegaya in Ugu yaraan 45 qof ayaa ku sumoobay ka dib markii ay caabeen caano sumeysay.
Dadkan ku sumoobay caanaha ayaa isugujiray Haween iyo Caruur ,waxaana kamid ah dadkan laba haween ah oo xaamilo ah. Ilaa iyo hadda lama xaqiijin in ay jiraan dad ku dhintay dhacdadan. Dadkii ku sumoobay caanaha waxaa la geeyay Isbitaalka degmada Carmo.
Previous articleAbiy Ahmed Is Not a Populist
Next articleGudigii uu magacaabay Camey oo xubno hor leh iscasilay iyo Farmaajo oo eed loo jeediyay
Madaxweynaha Somaliland oo kormeeray mashaariicda dhulka lagu beerayo